တနင်္ဂနွေနေ့ ဘောလုံးသတင်းများ - News @ M-Media
in အားကစား — January 24, 2021
ဇန်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၁
ခရီးသွားပုံရိပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆော်ဒီ၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရော်နယ်ဒိုပယ်ချ
ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ ခရီးသွားစီမံကိန်း ပုံရိပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုက ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။
ကန်ဒေါ်လာ ၇ သန်းကျော်ရမယ့် ဒီကမ်းလှမ်းမှုမှာ ဆော်ဒီကိုလာလည်ဖို့ နိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွား ကြော်ငြာတွေမှာ ပုံရိပ်အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆော်ဒီဟာ ဘာစီလိုနာက မက်ဆီကိုလည်း ဒီလို ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကတော့ ဒီကိစ္စကို ထုတ်ပြန်တာမျိုး မရှိပါဘူး။
နိုင်ငံရဲ့ စီမံကိန်းအတွက် အားကစားသမားတွေကို ဆော်ဒီက ပထမဆုံး ကမ်းလှမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်က နယူးကာဆယ်အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ ဆော်ဒီနိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Saudi Public Investment Fund က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ကြိုးစားခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ဆော်ဒီရဲ့လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းဆိုးတွေကြောင့် ဒီကမ်းလှမ်းမှုကို လက်မခံဖို့ ဆော်ဩခဲ့ကြပါတယ်။
ဘန်လေကိုအရှုံးက အလှည့်အပြောင်းဖြစ်မည်ဟု ကလော့ပ် ပြော
အခုတစ်ပတ် ဘန်လေကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲဟာ အသင်းအတွက် အလှည့်အပြောင်းဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂန် ကလော့ပ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်ဟာ နိုင်ပွဲမရှိသေးဘဲ ၂ ပွဲရှုံးပြီး ၃ ပွဲ သရေကျထားသလို၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း FA ဖလားမှာ အက်စတွန်ဗီလာတစ်သင်းတည်းကိုသာ အနိုင်ရထားပါတယ်။
ကလော့ပ်ကတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘာ့ကြောင့် ရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကို အဖြေရှာလို့မရကြောင်း၊ အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်ဟာ ဒီကနေ့မှာ မန်ယူနဲ့ FA ဖလားပွဲ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗန်ဒီ​ဘီခ် အသင်းတွင် မပျော်ရွှင်တော့ဟု ဆိုးလ်ရှားအတည်ပြု
ကွင်းလယ်လူ ဒိုနီ ဗန်ဒီဘီခ် အသင်းမှာ မပျော်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာ ဟုတ်တယ်လို့ မန်ယူနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက အတည်ပြုပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဗန်ဒီဘီခ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီကမှခေါ်ယူထားပြီး အဓိကကစားသမားဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမယ့် ၁၀ ပွဲသာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရထားပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားက ဗန်ဒီဘီခ်ဟာ ကစားမယ့်နေရာမှာ ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ တခြားကစားသမားတွေ ရှိတဲ့အတွက် နေရာပျောက်တာဖြစ်ကြောင်း၊ လူစားဝင်ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိမိအနေနဲ့ ဗန်ဒီဘီခ်ရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို နားလည်ကြောင်း၊ သူ့ကို အရေးပါသူတစ်ဦးအဖြစ် အသင်းက သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ ဗန်ဒီဘီခ်တစ်ယောက် သိနေပြီး ရှေ့ဆက် ပွဲတွ​ေအများကြီးကစားခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဆိုးလ်ရှားက ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဥရောပက ပိတ်ဆို့ အရေးယူမည်
ယူအေအီးမှ နာမည်ကျော် Sheikh Zayed ဗလီ ပုံတူကို အင်ဒိုနီးရှားတွင် တည်ဆောက်မည်
မည်သူအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စေ အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံမည်ဟု တရုတ်ပြော
တရုတ်ကိုထိန်းမည့် အာရှနေတိုးအဖွဲ့ ပထမဆုံး ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပမည်
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကို ဩစတေးလျ ရပ်ဆိုင်း
Afghanistan anti_Muslim_in_Myanmar Bangladesh China DailySportNews DailySportsNews Egypt EPL EPL 2015-16 EPL 2016-2017 featured India indonesia international short news Iran iraq Israel Japan LaLiga malaysia Man U Minority In Myanmar Myanmar Military north korea opinion Pakistan Palestine Philippines PremierLeague Rakhine State Rohingya russia SaudiArabia ShortNews singapore South Korea Syria thailand turkey UAE UK US US Muslims WuhanVirus Yangon
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (2) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗ်ာ (77) အစၥလာမ္ေအးရိပ္ ဆာယာသို႔ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ္စင္ (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime ေစာင့္ႀကည့္ေရး (26) ျပည္တြင္း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ (19) က်န္းမာေရးႏွင့္ေဆးပညာ (491) ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ပုဂၢိဳလ္မ်ား (210) ထူးခၽြန္လူငယ္ (16) ရဲေဘာ္ကိုေထြး (6) ဦးရာဇတ္ (23) ပညာေရး (91) မုိးေလ၀သ (4) ရင္ဖြင့္လႊာ (3) သတင္းမ်ား (17,503) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမာၻ႔မြတ္စလင္ သတင္းမ်ား (1,579) ကာတြန္း (50) ဓါတ္ပံုသတင္း (92) ရုပ္သံသတင္း (62) သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ (2) သတင္းေဆာင္းပါး (136) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ (565) သူ႔အျမင္ (220) အားကစား (2,710) ေဆာင္းပါးရွင္ အာေဘာ္ (18) ျပည္သူ႔အသံ (23) ျမန္မာသတင္း (4,128) ႏိုင္ငံတကာသတင္း (9,051) အာဖရိက (472) အာရွ-ပဖိဖိတ္ (2,934) အေမရိက (1,083) အေရွ႕အလယ္ပိုင္း (2,156) ဥေရာပ (1,018) သုတ၊ရသႏွင့္အေထြေထြ (1,391) Essay (1) M-Media Knowledge (35) Quote (16) ကမာၻေက်ာ္ မြတ္စလင္မ်ား (128) ကမာၻေက်ာ္မြတ္စလင္ အားကစားသမားမ်ား (30) ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ (6) စာတမ္း (5) ဘာသာျပန္ (161) ရသစာေပ (4) ဝတၳဳတို (6) သုတ၊ရသ (57) သေရာ္စာ (29) ေဆာင္းပါး (870) ေထြရာေလးပါး (84) ေပးစာ/ျပန္စာက႑ (26) ေၾကျငာခ်က္ (59) ႏွလံုးသားအာဟာရ (29) သူတို႔ေျပာသမွ် သူတို႔အေၾကာင္း (2) အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ (2) အႏုပညာ (2) ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္သမိုင္း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင္းထဲက ပံုရိပ္ (17)
Archives Select Month March 2021 (20) February 2021 (60) January 2021 (79) December 2020 (99) November 2020 (48) October 2020 (65) September 2020 (79) August 2020 (56) July 2020 (59) June 2020 (63) May 2020 (71) April 2020 (91) March 2020 (77) February 2020 (84) January 2020 (88) December 2019 (70) November 2019 (71) October 2019 (89) September 2019 (81) August 2019 (67) July 2019 (88) June 2019 (75) May 2019 (85) April 2019 (85) March 2019 (76) February 2019 (99) January 2019 (78) December 2018 (76) November 2018 (77) October 2018 (128) September 2018 (122) August 2018 (126) July 2018 (155) June 2018 (119) May 2018 (151) April 2018 (156) March 2018 (141) February 2018 (125) January 2018 (131) December 2017 (148) November 2017 (162) October 2017 (215) September 2017 (200) August 2017 (210) July 2017 (209) June 2017 (201) May 2017 (196) April 2017 (205) March 2017 (203) February 2017 (211) January 2017 (245) December 2016 (235) November 2016 (276) October 2016 (265) September 2016 (244) August 2016 (252) July 2016 (242) June 2016 (290) May 2016 (242) April 2016 (254) March 2016 (283) February 2016 (284) January 2016 (329) December 2015 (341) November 2015 (358) October 2015 (417) September 2015 (303) August 2015 (277) July 2015 (268) June 2015 (293) May 2015 (302) April 2015 (238) March 2015 (266) February 2015 (260) January 2015 (282) December 2014 (262) November 2014 (255) October 2014 (273) September 2014 (226) August 2014 (233) July 2014 (246) June 2014 (217) May 2014 (249) April 2014 (280) March 2014 (264) February 2014 (255) January 2014 (326) December 2013 (291) November 2013 (257) October 2013 (255) September 2013 (203) August 2013 (233) July 2013 (233) June 2013 (206) May 2013 (172) April 2013 (114) March 2013 (153) February 2013 (70) January 2013 (96) December 2012 (101) November 2012 (130) October 2012 (168) September 2012 (82) August 2012 (118) July 2012 (93) June 2012 (76) May 2012 (53) April 2012 (31) March 2012 (24) February 2012 (8) January 2012 (13) December 2011 (19) November 2011 (10) October 2011 (11) September 2011 (12) August 2011 (33) July 2011 (28) June 2011 (7) May 2011 (15) April 2011 (9) March 2011 (8) February 2011 (12) January 2011 (15) December 2010 (16) November 2010 (21) October 2010 (29) September 2010 (30) August 2010 (4)
Copyright © 2021 — News @ M-Media. All Rights Reserved. Designed by WPZOOM